Madaxweynaha cusub ee Puntland oo maanta xilka la wareegay - Halbeeg News
Madaxweynaha cusub ee Puntland oo maanta xilka la wareegay
Xilwareejinta Puntland: Bidix, Cameey, Cabdiweli Gaas, Madaxweynaha cusub Dani iyo ku xigeenkiisa Karaash
Munaasabad xil wareejin ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland.
Munaasabaddan ay xilalka kula wareegayeen madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ee Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisii Cabdixakiim Xaaji Cumar Camey ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay madaxweynaha cusub mudane Saciid Cabdullaah Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Madaxweyne Deni ayay golaha wakiillada maamulka Puntland 8-dii bishan u doorteen in uu noqdo madaxweynaha Puntland hoggaamin doona shanta sano ee soo socota waxaana la filayaa in ay dhacdo munaasabadda caleema saarka madaxweynaha dhawaan.
Madaxweyne Deni ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin waaweyn kuwaasoo looga fadhiyo in uu wax ka qabto sida hagaajinta xariirka maamulka Puntland kala dhexeeya dowladda federaalka, iyo waliba colaadda u dhexeysa maamulkiisa iyo Somaliland.